Usayizi we-Queen - Indlu yobuciko esendaweni ephakathi nendawo, eyimfihlo - I-Airbnb
Usayizi we-Queen - Indlu yobuciko esendaweni ephakathi nendawo, eyimfihlo
Kaleen, Australian Capital Territory, i-Australia
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Indy
Indlu egcwele ukukhanya, enomoya enemisebenzi evela kumaciko endawo yonke. Njengoba uyigumbi lokulala elingemuva, uzobe ucashile kakhulu.Ikhaya lami lisekhoneni ngakho-ke kukhona indawo yokupaka eyanele ngaphandle komgwaqo kanye ne-carport eyodwa etholakalayo.Uzoba endaweni ethule, eduze nendawo yokuzijabulisa yakwa-Dickson, izitolo zasendaweni nezindawo zokuzivocavoca kanye nezithuthi zomphakathi.Ikhaya lami ngu>9k kusuka eCanberra City noma eBelconnen. Ikhaya lami lifakwe izinto zakudala, ngakho ifenisha ingase ibe ne-patina endala.
Umuzi wethu wakhiwa ngeminyaka yawo-1970 kodwa wavuselelwa/ walungiswa ekuqaleni kwawo-2000.Ine-rustic charm, isithwe izihlahla ezimile kahle kodwa inengaphakathi lesimanje. Ungakwazi ukwabelana ngendawo nesivakashi ekamelweni elilingana nenkosi
4.52 out of 5 stars from 172 reviews
4.52 · 172 okushiwo abanye
Ngizohlala endaweni yasengadini, endaweni kodwa ngingaxhumene nendlu.Uma usebenzisa umnyango ongemuva, ungangibona. Ngihlala ngitholakala uma unokukhathazeka noma izinkinga noma uma unemibuzo mayelana nenhloko-dolobha yethu kazwelonke.Ngizokwenza konke okusemandleni ami ukwenza ukuhlala kwakho kube ngcono kakhulu. Ngimatasa ngakho ngicela ungithinte, nge-AirBnB noma ubuso nobuso.
Ngizohlala endaweni yasengadini, endaweni kodwa ngingaxhumene nendlu.Uma usebenzisa umnyango ongemuva, ungangibona. Ngihlala ngitholakala uma unokukhathazeka noma izinkinga noma um…
Hlola ezinye izinketho ezise- Kaleen namaphethelo